free ụzọ nyefee video si iPhone ka iPad
3 Ụzọ nyefee Video Site iPhone Iji iPad
Apple obụrede mbụre nke ha na-ekewaghị ngwaahịa iPhone na iPad. IPhone dị mma ndekọ videos ka tụnyere ha mbadamba; iPad mgbe Emmanuel na-renown n'ihi na ya pụrụ iche video ikiri. Ya mere, na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ị nwere ike ọtụtụ videos na gị iPhone na ị chọrọ nyefee ha ka ha iPad. Ya mere, i kwesịrị nyefee ha ka ha a mbadamba na-enwe ya ịtụnanya atụmatụ na ụwa na-ekpori. E nwere ọtụtụ ụzọ nke na-ebufe vidio ndị a n'etiti abụọ iOS ngwaọrụ. Ị nwere ike ma na-eji iTunes ma ọ bụ jiri email. Ọzọkwa ị ka nwere ike iji airdrop igbe. Ke ibuotikọ emi m ga-eduzi gị na otú nyefee vidiyo site na iji onye ọ bụla usoro.
Part1: otú nyefee Video Site iPhone ka iPad Iji iTunes
Part2: otú nyefee Video Site iPhone Iji iPad Iji Airdrop
Part3: otú nyefee Video Site iPhone ka iPad Iji Email
Ịrụ a usoro ọma mkpa ka ị nyefee ihe videos gị iPhone na a na kọmputa. Ọhụrụ version nke iTunes ga-arụ ọrụ kasị mma maka gị. Ọzọkwa, hụ na ị na-enwe eriri USB. Ịmara na ugbu a-eso ndị a.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone na kọmputa
Malite site na-ejikọ gị iPhone na kọmputa na iji eriri USB. ITunes ga-akpaghị aka ẹkedori onwe ya na kọmputa gị. Mgbe ahụ na-emeghe gị iPhone na iTunes window n'okpuru icon Devices.
Nzọụkwụ 2 Họrọ vidiyo na-agafere
Mgbe ị na pịa gị iPhone icon a ndepụta nke gị ihe na iPhone ga-egosipụta. Mgbe eme otú pịa Mee na mgbe ahụ mmekọrịta buttons na ala nke iTunes window. Site n'ime otú họrọ videos ga-agafere gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 3 Jikọọ gị iPad
Ugbu a ịkwụpụ gị iPhone site na kọmputa na jikọọ na gị iPad na kọmputa. Gaa iTunes na kọmputa gị na pịa na iPad akara ngosi.
Nzọụkwụ 4 Họrọ videos nyefee site na kọmputa na-iPad
Site n'ebe pịa égwu mgbe ahụ ịnyagharịa cursor ka ala nke window na pịa File Ịkekọrịta. Mgbe ahụ, pịa on Add icon t o họrọ vidio ndị na-na-agafere iPad.
Nzọụkwụ 5 Nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPad
Mgbe na-ahọpụta ndị videos click on mmekọrịta. Nke a click ga-enyere videos-zigara gị iPad. Ugbu a ị pụrụ ịnụ ụtọ zuru ikiri gị videos na gị iPad
Airdrop bụ a wireless ụzọ ebufe faịlụ site na iOS ngwaọrụ. Usoro a na-eji Bluetooth ike a njikọ ikuku n'ofe ngwaọrụ. Ọ na-akwado ọhụrụ version nke iOS ngwaọrụ na iPhone na ipad na-eji iOS 7. Airdrop-enye gị ohere nyefee videos, foto na akwụkwọ n'etiti iOS ngwaọrụ. Na gị iPad na iPhone na aka-eso ndị a nyefee faịlụ
Nzọụkwụ 1 Gbalite Airdrop na gị Devices.
Akpa emeghe Control Centre na gị iPhone na iPad site swiping ihuenyo nke ngwaọrụ n'elu. Mgbe ahụ enweta na Airdrop na akara ngosi na ma gị na ngwaọrụ. Ugbu a mkpa ka ị họrọ onye ịkọrọ gị faịlụ na. Ugbu a Pịa na Ndi ana-akpo naanị. Nke a ga-Gbochie unapproved onye si eziga gị ha faịlụ
Nzọụkwụ 2 Turn gị iPhone Videos na-agafere
Pịa na Photos ngwa gị iPhone. Site n'ebe pịgharịa gaa Videos na ị chọrọ ime ka iPad.
Nzọụkwụ 3 Họrọ Videos nyefee
Ebe a, mkpa ka ị họrọ vidio ndị a ga-bufee. Mgbe ị gụsịa ahọpụta Hover na ala ekpe ma pịa bọtịnụ Share.
Nzọụkwụ 4 Jikọọ iPad na IPhone
Mgbe ị pịa òkè a ndepụta nke ejikọrọ ngwaọrụ ga-apụta. Enweta na gị na-akọrọ iPad
Nzọụkwụ 5 Nyefee chọrọ Videos
A nkwenye bụ amanyere bụ iwu na gị na iPad aka faịlụ na-gbanwere. Nabata ya site na ịga Photos ngwa. Wee nọdụ ala azụ ma na-ekiri vidio-zigara gị iPad. The mkpumkpu na video ndị mkpumkpu oge ọ ga-ewe iji-kpaliri.
Ọ bụghị ihe ijuanya ịchọpụta ọtụtụ ndị si n'ebe dị na-eji ozi ịntanetị izipu akwụkwọ. Na email ngwa gị iPhone na iPad ị pụrụ iji ya nyefee videos, foto, akwụkwọ nakwa dị ka ozi. Nke a bụ otú nyefee vidiyo na email. Mepụta adreesị ozi-e ma ọ bụrụ na ị na-adịghị otu.
Nzọụkwụ 1 Open na hazi Email ya na ngwaọrụ gị
Hụ na gị na email na-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 2 Open vidio ndị a ga-agafere
Open Photo ngwa gị iPhone. Pịa na video a kpọfere iPad. Enweta na Share button ma họrọ Mail.
Nzọụkwụ 3 ikpegara ozi email
Dị nnọọ ka ị na-eme mgbe ezipụ ozi Ịnwere ike ikpegara ozi ma tinye nnata adreesị ozi-e. Mgbe ị na-ezitere faịlụ ka onwe gị ọ dịghị mkpa ike a ozi. Mgbe ị na-rụchaa enweta na Send
Nzọụkwụ 4 Open email na gị iPad a0nd ịzọpụta videos
Nke a na ozi ga-egosi na gị iPad ngwa. Mepee mail na enweta na zitere videos na-azọpụta ya na gị na iPad.
The n'elu bụ ụzọ nke na-ebufe vidiyo si na iPhone ka iPad. Họrọ otu na-agọzi gị na nyefee gị videos.
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Samsung Galaxy S3 ka S4
> Resource> Nyefee> 3 Ụzọ nyefee Video Site iPhone ka iPad